नेपालदृष्टि । स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब १९ दिन मात्र बाँकी छ । राजनीतिक दलहरू उम्मेदवार चयन गर्न र घोषणापत्र लेख्नमा जुटेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न दौडधुप गर्नेहरू धेरै छन् । उक्त दौडमा बहालवाला जनप्रतिनिधिहरू पनि छन् ।
रतुवामाई नगरपालिकाको नगर प्रमुखमा आकांक्षा राख्ने नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट रविन राई, कन्हैया राजवंशी, नागेश्वरप्रसाद सिंह, जीवन पनेरु, होमा घिमिरे, फणिन्द्र गड्तौला,मेदिनीप्रसाद भट्टराई, फणिन्द्र थापा, यामप्रसाद कोइराला, गिरिजाप्रसाद यादव, निमचन्द शाह, खडानन्द न्यौपाने (सुभाष) र चन्द्रकान्त माझी लागिपरेका छन ।
यसरी नगर प्रमुखको उम्मेदवारका अरु आकांक्षीहरु रविन राई र कन्हैया राजवंशीसँग त्यति प्रतिष्पर्धात्मक देखिदैन । वर्तमान अवस्थामा नगरभित्रको चर्चा परिचर्चा, लोकप्रियता, कौतुहलता र नेतृत्व क्षमताको आधारमा रविन राई नै निकै अगाडि देखिन्छन । त्यस्तै राजवंशी पनि लामो समयदेखि नै जनप्रतिनिधिको रुपमा रहि कुसल नेतृत्व गर्दै आएका राजनीतिककर्मी हुन ।
(भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासि लाई जग्गा वितरण गर्ने र अव्यवस्थित व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठ तथा राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौला र रतुवामाई नगरपालिका नगर प्रमुख रविन राई बिच कार्य सहमति पत्र हस्ताक्षर र आदान प्रदान गरिदै )
नगरभित्र राईले गरेको योगदानको मूल्यांनकै आधारमा उनिसँग प्रत्यक्षरुपले काम गर्दै आएका एमाले,माओबादी,राप्रपाआदि जुन सुकै पार्टीका ब्यक्तिको ब्यक्तिगत धारणामा उनिमाथि कसैले पनि नकारात्मक टिप्पणी गरेका छैन । राजनीतिक विभेद भन्दा पनि नगरको समग्ररुपको विकासमा सदैव लागेका र लाग्नुपर्छ भन्ने मनसायका राईलाई ब्यक्तिगत रिसिवीका कारण उनको योगदाननै गलत हो भन्नु संकोचित भावना हो ।
चाहे भोलि हुने नगर प्रमुख जुनसुकै पार्टीको किन नहोस उसमा राम्रा नराम्रा दुवै पक्ष हुन्छन । त्यसलाई सही मूल्यांकन गर्ने जिम्मा हामी नगरबासीको हो । सधै उसको नराम्रा पक्षलाई मात्र उजागर गर्नुु हुदैन । राम्रा पक्षहरुलाई पनि हामीले हेर्ने बानी बसाल्नु पर्छ । त्यसैले भन्ने गरिन्छ फूलका आखाँमा फूल संसार,काँडाका आँखामा काँडै संसार ।
नगरको आन्तरिक श्रोत र क्षमता अनुसारको विकास र उसको जनता तथा नगरप्रति उत्तरदायित्वको हिसाव किताव राख्ने कुरा हो । तर उसको मात्र पार्टीगत र ब्यक्तिगत पक्षलाई लिएर नकारात्क टिप्पणी गर्नु राम्रो कुरा होइन । यसरी नकारात्मक टिक्का टिप्पणी गर्ने मनस्थितिले गर्दा आफू र आफ्नै पार्टीका जनप्रतिनिधिप्रति पनि सदैव नकारात्क दृष्टिकोण रहने छ । जसले गर्दा नगरका हरेक पक्षका विकासका कार्यहरु सवैनै नराम्रा र गलत देखिन्छ ।
मुलुकमा कुन पार्टीका नेताले पाँच पाँच वर्ष आफ्नो सरकार बनाएन । तर पनि हामी किन सन्तुष्ट छैनौ .... ?
(रतुवामाई नगरका स्वास्थ्य चौकीहरुको भवन निर्माणका लागि आवश्यक बजेट र रतुवामाई नगर अस्पताल झुर्कियालाई सुविधा सम्पन्न बनाउन विभिन्न स्वास्थ्य उपकरणको माग सहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचीव डा. रोशन पोखरेलसँग नगरप्रमुख रविन राई । )
नेपालको जनयुद्धले के दियो के दिएन ?